The Silken Thomas, Kildare Town no toerana halehanao farany. Mirehareha amin'ny fiankinan-doha tanteraky ny fianakaviana mandritra ny 45 taona amin'ny serivisy kalitao sy sakafo matsiro ho an'ny vahiny rehetra. Fanompoana ny sakafo maraina, atoandro ary sakafo hariva isan'andro mandritra ny toerana sy ny tampon'ny tampon-trano, io no toerana mety indrindra tonga orana na mamirapiratra. Tsy maninona ny fotoana niresahan'i Silken Thomas anao.
Ny Venue dia voaravaka lamaody eraky ny habakabaka mba hisakafoanana amin'ny fisakafoanana antoandro sy ny traikefa fisakafoanana ankehitriny. Silken Thomas dia mirehareha amin'ny tafo fisakafoanana an-kalamanjana mitafo any an-tokotany mba hankalazana ny trano anatiny sy kanto manodidina atolotra.
Ny trano fisakafoanana dia manolotra vokatra vaovao hatrany amin'ny lisitry ny lovia iraisam-pirenena mahaliana miaraka amina sary an-tsaina feno fahendrena. Tamin'ny 2021 dia voafidy tao amin'ny top 10% ny fisakafoanana maneran-tany ny Tripadvisor. Fitsapana tsy maintsy andramana amin'ny fitsidihana an'i Town Kildare.
Silken Thomas koa dia manana ny fomban'ilay nentim-paharazana miaraka amin'ny fisotroana nentin-drazana any Irlandey ao afovoan'i Kildare Town. Eto dia misy labiera be dia be sy mahavariana momba ny labiera fanaovana asa-tanana, fanahy talantalana ambony ary cocktail mpamorona. Mialà sasatra ao amin'ny tranombokin'ny tranomboky vao nohavaozina na alao ny sasany amin'ireo fahatsiarovana ara-panatanjahantena dia i Squires ary ankafizo ny fandrakofan'ny fanatanjahantena rehetra. Squire's dia vato fehizoro amin'ny sehatry ny mozika mivantana ao amin'ny tanànan'i Kildare miaraka amina fialamboly isaky ny zoma, asabotsy ary alahady fialantsasan'ny banky.
Aorian'ny fialantsasatra amin'ny alina be dia be ary apetraho ny tongotrao ao amin'ny iray amin'ireo efitrano fandraisam-bahininay 27 efa voafaritra tsara ao amin'ny Silken Thomas Accommodation. Ankafizo ny fiantsenana iray andro ao amin'ny Kildare Village Outlet eo an-toerana miaraka amin'ny fihenam-bidy 10% rehefa manoratra miaraka aminay, ary koa ny fihenam-bidy ho an'ny fitaovana eto an-toerana toy ny The National Stud and Gardens. Manolotra parking maimaim-poana ho an'ny vahininay rehetra ihany koa izahay.
Nomena mari-pankasitrahana avy amin'ny Tripadvisor tamin'ny 2021 ny Silken Thomas dia manome traikefa tsara ho an'ireo vahininy.
Ny Silken Thomas dia eo am-pivoahana ny 13 eo amin'ny M7 ary eo afovoan'i Kildare Town.
Pubs & Nightlife, trano fisakafoanana, Sakafo mahazatra, Ny fisakafoanana ivelany, Live Music, Irlandey / eropeana, Hotels, Mpinamana, 3 Star, Kildare
16, Kianjan'ny tsena, Kildare, County Kildare, Irlandy.
Alakamisy - Masoandro: 10 maraina - 11 hariva